Singapore education service in myanmar, Singapore medical service in myanmar | CareForever Services | NIPT experience sharings of mothers (2.8.19)
Newsroom and articles
NIPT experience sharings of mothers (2.8.19)
Careforever မှ "iGene NIPT Test"စစ်ဖူးတဲ့ မိခင်တွေရဲ့မျှဝေမှုများ
“ကျွန်မ က ကိုယ်ဝန် (၁၀) ပတ် ကျော် ရှိပါပြီ။ အသက်(၃၀)ကျော် မှရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လည်းဖြစ်တာရယ် မျိုးရိုးထဲမှာ လည်း ဒေါင်းစင်ဒရုန်း(မျိုးရိုးဗီဇ ချို့ ယွင်းမှု) ကလေး ရှိခဲ့ဖူးလို့iGene - NIPT Test ကိုစစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ NIPT ဆိုတာ သန္ဓေသား မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေး တာပါ။”
“အခုဆိုရင် စင်္ကာပူထိ သွားစစ်စရာ မလိုဘဲ iGene Singapore brand ကို မြန်မာပြည်မှာ ဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ စစ်လို့ ရ ပြီး တိတိကျကျ သိရတယ်လို့ Careforever မှ တင်ထား တဲ့ post ကတဆင့် သိလိုက်ရတဲ့ အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရဲ့ သွေးမှတဆင့် စစ်ဆေးပေးတာပါ။ စင်္ကာပူကို သွေးပုလင်းလေးပို့ပြီး စစ်ဆေးပေးပါတယ်။”
“ဓါတ်ခွဲခန်း မှ iGene NIPT test အဖြေ ကလည်း ၂ပတ် အတွင်း သိရပါတယ်။ အဖြေကို အွန်လိုင်း email ကနေ ပို့ ပေးလို့သိရတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သားလေးဆိုတာ ကိုလည်း အစောဆုံး သိရပြီး ပျော်တာရော သားလေးက ဘာမျိုးရိုးဗီဖ ချို့ ယွင်းမှု မှ မရှိဘူးဆိုတာပါ သိလိုက်ရ လို့အရမ်းပျော်ပါတယ်။"
“အခုဆို SSC Women’s Center, Bahosi, Sakura, Victoria ဆေးရုံ တွေ အပြင် Kyaw Mahar Specilaist Clinic နဲ့Thukha Mingalar Specialist Clinic တွေ မှာ iGene NIPT test စုံစမ်း စစ်ဆေးလို့ ရပါတယ်။"
Free Home service for ရန်ကုန်
"ရန်ကုန်မှာ ဆို ရင် အိမ်မှာလာစစ်ပေး တဲ့ စနစ် လည်း ရှိသေး တယ်နော် (လာဖောက်ခ လည်း ထပ်ပေးစရာ မလိုဘူးတဲ့)။ ကြို တော့ ရက်ချိန်း ယူရပါတယ်နော် စင်္ကာပူကိုပို့ ပေး ရတာမို့လို့ ပါ။ (Viber ph no. 09 4021 97297, 09 430 32152)"
Package ၂ မျိုး ရှိ ပါတယ်
“ဖောက်တဲ့ iGene NIPT test ရဲ့ package အမျိုးအစား က Comprehensive package ပါ။ သားလေးလား သမီးလေး လား နဲ့ဒေါင်းစင်ဒရုန်း အပါအ၀င် သန္ဓေသားမျိုးရိုး ဗီဇချို့ ယွင်းမှု ၁၆ မျိုး ထိသိရပါတယ်။ ဈေး က USD 650 ပါ။
ပုံမှန် Basic package ဆိုရင်တော့ သားလေးလား သမီးလေး လား နဲ့ဒေါင်းစင်ဒရုန်း နှင့် ဆက်စပ် နေသော စင်ဒရုန်း ၂ မျိုး ထိ သိရပါတယ် USD 550 ပါ)။ ဖောက်တဲ့ နေ့ မှ မြန်မာငွေ နဲ့ပေးချေပေး ရုံ ပါပဲ။ အစစ အရာ အဆင်ပြေလို့Careforever ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
Careforever ရဲ့ "iGene NIPT Test" လို့ပြော ပေး ပါ။ ဒါမှ စိတ်ချ ရပါမယ်။ အသေးစိတ်ကိုထပ် သိချင်ရင် အောက်က လင့်ခ် မှာ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Careforever Messenger ကနေလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Viber ph no. 09 4021 97297, 09 430 32152 ကိုလည်း ဆက်သွယ် စုံစမ်း နိုင်ပါတယ်။
Careforever Medical Referral Services
Photomedic visit from Malaysia
Oncocare visit to Myanmar
Victoria Hospital and Care Forever Services
Concord International Hospital and Care Forever Services
iGene Lab and Care Forever Services
Haematology - Breast Service
Family Medicine and Continuing Care
Gastroentrology and Hepatology
Plastic, Reconstrucitve and Aesthetic Surgery
Psychiatry - Rehabilitation Medicine
Other Speciality Centres
Ear, Nose and Throat Centre
Dietetics and Nutritional Support
2019 October Intake School Admission's Entrance Exam and Related Training Support
BCA Academy opened April 2017 School of Education School Seminar Invitation
BCA Academy of Singapore in October Intake 2016 second educational seminar and held exam